Xukuumadda Soomaaliya oo shaacinaysa natiijada imtixaankii shahaadiga ahaa. – Radio Daljir
Xukuumadda Soomaaliya oo shaacinaysa natiijada imtixaankii shahaadiga ahaa.
Luulyo 12, 2016 11:00 g 0
(July 13 2016)-Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Dr Cabdi qaadir Cabdi Xaashi, oo kormeerayey goobaha lagu saxayo imtixaanka shahaadiga ah ee xukuumadda Soomaaliya qaaday ayaa sheegay inay ku dhawaaqayaan natiijamada imtixaanka.
Wasiirku waxa uu shaaciyey in wasaaraddiisu ay mudo labo todobaad ah kadib ku dhawaaqi doonto natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkaan ay qaaday dowlada Soomaaliya.
Dr Cabdi qaadir Cabdi Xaashi, ayaa ku booriyey macalimiinta saxaysa imtixaanka shahaadiga ah ee ay qaaday xukuumadda Soomaaliya inay u cadaalad sameeyaan ardayda Imtixaanka loo saxayo.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sanadkii labaad oo xiriir ah imtixaan shahaadi ah ka qaaday qaar kamid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, inkastoo uu muran kala dhexeeyey dalladaha waxbarashada madax banaan.
DHEGEYSO-Wareega 2aad ee Barnaamijka tartan iyo tacliin oo lasoo gabagabeeyey.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Boosaaso 13 07 2016.